Backup Kubata Plus, Remote KeyPad uye mamwe emahara maapplication kuyedza ino vhiki | IPhone nhau
Backup Kubata Uyezve, Remote KeyPad uye mamwe emahara maapplication kuyedza vhiki ino
Ehe hongu, pakupedzisira Chishanu! uye ndeipi nzira iri nani yekuipemberera pane kuva ne yemahara app kusarudzwas, iyo mhando yaunowanzoona kuburikidza neApp Store nyowani asi haunzwi sekubhadhara. Zvakanaka ikozvino unogona kuzviwana mahara, pasina kubhadhara kana sendi.
Ehe, iwe unofanirwa kukurumidza nekuti iri pamusoro yakatemwa nguva inopa Naizvozvo, tinokukurudzira kuti udzibudise nekukurumidza sezvazvinogona kuti ugone kubatsirwa kubva pakutapudza. Kubva IPhone nhau Tinogona chete kuona kushanda kwayo panguva yekutsikisa ichi posvo, asi kwete gare gare nekuti vanogadzira havawanzo kupa iwo ruzivo. Saka tora uye unakirwe nekuedza maapps matsva kupera kwevhiki rino
1 Negadziriro yeparutivi Contacts Plus
2 Delete Contacts + zvakapetwa
3 Remote KeyPad yeMac
4 Nzvimbo dzekugadzirisa - reflexology ruoko
5 Aftab Chiedza
Negadziriro yeparutivi Contacts Plus
Isu tinotanga nebasa rakakura, "Backup Contacts Plus", chishandiso icho, sezita zvarinoreva, chinokutendera iwe dzorera shamwari dzako kuvachengeta vese vakachengeteka. Iwe unogona kutumira iyo backup ne meseji kana email. Uye iwe unogona kudzorera shamwari dzako kubva kuapp nekungovhura iyo yakagamuchirwa .vcf faira. Uyezve, iyo inopawo mamwe mabasa, asi ini ndichakurega iwe uzviwanire izvo pachako vhiki ino.
"Backup Contacts Plus" ine mutengo unowanzoitika we2,29 euros, zvisinei ikozvino unogona kuzviwana mahara zvachose.
Delete Contacts + zvakapetwa
Isu tinoenderera nechimwe chishandiso chekutarisa vako vanofambidzana zvakare kubva kune mumwe chete musimudziri senge yapfuura, Jonathan Teboul. Iyo "Delete Contacts + Duplicates", Anwendung yauchakwanisa nayo tsvaga, sangana kana kudzima vanyowani vane zvakapetwa nekukurumidza uye nyore. Uye zvakare, iwe unogona zvakare kugadzira backup makopi uye kudzoreredza mazita kubva kuapp pachayo saka, kana iwe wakanonoka kune yapfuura kupa, uyu mumwe mukana wakanaka.
"Delete Contacts + Duplicates" ine mutengo wenguva dzose we1,09 euros, zvisinei ikozvino unogona kuiwana yemahara.
Remote KeyPad yeMac
«Remote KeyPad yeMac» chishandiso chakakosha nekuti chinja yako iPhone, iPad kana iPod kubata mubhobhodhi yeMac. Iwe unogona kuwedzera iyo keyboard ye Mac yako nenhamba yenhamba kiyi basa kuti nokudaro upinze manhamba zviri nyore. Asi iwe unogona zvakare kupururudza kuburikidza nerunyorwa, mharidzo maspredishiti ari kure, uye kunyange kudzora yako Mac uri kure.
"Remote KeyPad yeMac" ine mutengo wenguva dzose we1,09 euros, zvisinei ikozvino unogona kuiwana yemahara.
Nzvimbo dzekugadzirisa - reflexology ruoko
Isu tava kusvetukira kuchishandiswa chakasiyana zvachose kubva kune apfuura, zvakabatana nemunda wehutano uye hupenyu hwega hwega. Iyo "Remedial mapoinzi - reflexology ruoko", iko kunyorera kunoratidzwa senge rudzi rwe mepu yeruoko uko iyo «biologically active points» zvinoratidzwa pamwe chete nezviito zvinofanirwa kuitwa pavari kugadzirisa hutano hwedu. Chinokosha chakarara muReflexology, chirango chinoongorora kubatana pakati pemapoinzi aya nezvimwe zvikamu zvemuviri wemunhu nenzira yekuti, nekushanda pane aya mapoinzi, kugona kunoshamisa kwekurapa kunogona kuwanikwa!
Mugadziri waro anoti nekuda kwe «Remedial points - reflexology ruoko» tinogona kunatsiridza kushanda kwehuropi, kuwedzera simba redu, kuzvisunungura kubva kunetseka, bvisa kufunganya, kurapa kushaya hope, kugadzirisa hutachiona uye kunyangwe kuora muviri. Mmmmmm…. Ini handizive, sevha inongovimba izvo zvinouya zvakapoteredzwa asi tichifunga kuti ndeye mahara, tinogona kuyedza. Uye kana zvikasashanda, zvirinani kuti tichava nenguva yekunakidzwa.
"Remedial points - reflexology ruoko" ine mutengo wenguva dzose we0,49 euros, zvisinei ikozvino unogona kuiwana yemahara.
Uye isu tinogumisa kusarudzwa kwedu kwemahara kunyorera kwevhiki ino ne "Aftab Luminance", chirongwa chakanyatsogadzirirwa avo vachazopukunyuka, vane chiitiko kana kungoenda kunotora mifananidzo mazuva ano.
Ne «Aftab Luminance» unogona gadzira mifananidzo yeHDR mune imwe neimwe yemapikisheni anoinyora inoenderana neicho chaicho kukosha kwechiedza. Ini ndinobvuma kuti ini ndinorasika muhunyanzvi saka, kana iwe uchinzwisisa mafoto, tarisa uye utore pasi, nekuti urikuenda kunochengetedza mapfumbamwe euros
"Aftab Luminance" ine mutengo wenguva dzose wee8,99 euros, zvisinei ikozvino unogona kuiwana yemahara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Kutengesa » Backup Kubata Uyezve, Remote KeyPad uye mamwe emahara maapplication kuyedza vhiki ino
Mmm Aftab Luminance haina mahara, inoverengwa 7.99 Maeuro = (
Jose Alfocea akadaro
Mhoro GuevaraL, "izvi zvishoma-nguva zvinopihwa", sekuratidzira kwandakamboita pakutanga. Iwe unofanirwa kukurumidza nekuti vanogadzira vane tsika yakaipa kwazvo yekusaratidza chero nguva yekupedzisira, iine mashoma mashoma kunze. Pamwe nguva inotevera! Zvichengete pane yako yekuda rondedzero nekuti kana iri yemahara zvakare isu tinokuzivisa iwe.
Pindura kuna Jose Alfocea
Apple inopa madhora miriyoni kuti vabatsire vakawirwa nekudengenyeka kwenyika muMexico
Apple TV 4K hairidze UHD zvemukati paYouTube